PS5 na Xbox Series X flip-flops hint na ike dị egwu na consoles na - esote - BGR - TELES RELAY
PS5 na Xbox Series X flip-flops hint na ike dị egwu na consoles na-esote
A ka nwere oge Microsoft na Sony ime ọkwa na-atụghị anya tupu ngwụsị ọnwa ahụ, ma ihe ịrịba ama niile na-egosi ụbọchị ọzọ ka ekpughere izu nke Xbox Series X na PS5. Ka ọ dị ugbu a, anyị kwesiri ịdabere na ntapu iji nyere anyị aka dejupụta oghere mgbe a bịara njupụta na njiri mara maka consoles na-esote, na izu a anyị nwere ike nweta ụfọdụ nkwenye na-atọ ụtọ banyere ike nke nkasi obi.
NeoGAF OsirisBlack forum onye, ​​bụ onye akwadoro dị ka ndị ọrụ tụkwasara obi, pụtara na Ndekọ mkpọkọ PS5 na Xbox Series X Tobọchị Wenezde ị ga-ekerịta ihe anecdote banyere nzukọ na onye nrụpụta n'oge na-adịbeghị anya, ebe ha nwere ohere igwu egwuregwu ọkpụkpọ egwuregwu ọzọ a na-akpọghị aha.
Lee otu OsirisBlack si kọwapụta ahụmịhe ha na egwuregwu omimi ahụ, nke, na - akpọghị aha:
Onye na-ahụ maka injin na-ese ihe na-achị m ọchị maka ịkwụsịtụ sekọnd iri atọ ọ bụla ka ịgbanyụọ igwefoto ma lee anya na saịtị ma gee ntị n'egwuregwu ụwa egwuregwu ha. ọkụ ọkụ ọkụ. Ihe odide niile dị na egwuregwu a bụ ihe pụrụ iche. Will gaghị ahụ otu ụdị okike ihe karịrị otu oge. "
Ka m na-egwu egwu, achọpụtara m na egwuregwu a siri ike. Ana m egwu ọtụtụ egwuregwu asọmpi n'ọtụtụ ụdị (Smite, R6, SFV, CoD, BF, Njikọ) mana ana m azụta ịnyịnya ibu m. M na-ewere ihe bụ isi na paseeji na ndị iro abụọ batara n'ime ụlọ ahụ site na-agbapụ ma na-agagharị na ihe yiri ka atụmatụ aghụghọ. "Nwoke a na - awụ akpata oyi na-agba m ebe onye nke ọzọ na - achọ ịgagharị tụgharịa m?" Ọ chịrị ọchị ọzọ. "Ee, ọkụ ọgbụgba. Ka onye iro na-akụ m ihe, achọpụtara m na mwepu nke geometry ahụ ekpughere, iberibe ciment na-enye ohere, na-ekpughe ọkpọkọ ígwè dị n'okpuru nke na-ejikọta ihe owuwu ahụ. Ihe niile dabere n’eziokwu, gụnyere ihe na-eme mgbe ịgbụrụ ma ọ bụ gbaa. Ọ mara mma mana ọ maghị mma.
Mgbe ngosi ahụ kwụsịrị, OsirisBlack jụrụ onye mmebe ahụ ma egwuregwu ahụ na-agba na okpoko 60 n'otu nke abụọ, mana ọ wụrụ akpata oyi mgbe a gwara ya na egwuregwu ahụ na-agba na 90 FPS akpọchiri na mkpebi 4K nke ụmụ amaala. Mgbe a jụrụ onye njikwa ruru ụdị ụdị a, onye mmebe ahụ zara “ha abụọ”.
OsirisBlack jụkwara maka ọrụ izugbe nke consoles abụọ ahụ ma gwa ya na ha abụọ nwere otu ebumnuche ha, mana ọ ka ga-ahụ ma ma ha enweghị ike iru ebumnuche a. O doro anya na ihe mgbaru ọsọ a bụ teraflops 12, okpukpu abụọ nke Xbox One X na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu atọ nke PS4 Pro. Ọ bụrụ na ngọngọ abụọ ahụ ga-adị ike, nke ahụ na-akọwa ihe kpatara asịrị ahịa mkpọsa ruru $ 499 maka nke ọ bụla.
N'ikpeazụ, na njedebe nke edemede ahụ, OsirisBlack gbakwụnyere na ndị mmepe nke GDKs (ngwa egwuregwu mmepe) abụghị nke ikpeazụ, kama na ngwa Xbox Series X dị "n'usoro nke ike" ebe ngwa PS5 ka “zuo ezu ma nụchaa. Anyị enweghị ụzọ anyị ga-esi kọwaa ihe ọgbaghara a, mana ọ bụrụ na nke ahụ bụ eziokwu, ọ na-enye anyị echiche siri ike banyere ihe anyị nwere ike ịtụ anya ya site na nkasi obi ọgbọ ọzọ mgbe ha mechara daa ọdịda a.
Isi ihe oyiyi: Microsoft
Jekọb bidoro ikpuchi egwuregwu vidio na teknụzụ dị na kọleji dị ka ihe ntụrụndụ, mana ọ bịara doo ya ngwa ngwa na nke a bụ ihe ọ chọrọ ime maka ndụ. Ọ bi ugbu a na New York ma dee maka BGR. Enwere ike ịchọta ọrụ ya ebipụtara na TechHive, VentureBeat na Game Rant.
Mpaghara ọdụ ụgbọ mmiri Cameroon-Denmark: Denmark na-elekwasị anya na Cameroon.
Kwụsị ihe ị na-eme ma were izizi Animatronic Baby Yoda na Amazon. Ugbu a. - BGR